တစ္မိနစ္ကို (၂၈) ကြိမ်နှုန်းနဲ့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး မိုးကြိုး အပစ်ခံနေရတဲ့ မြို့တစ်မြို့အကြောင်း – Daily News
တစ္မိနစ္ကို (၂၈) ကြိမ်နှုန်းနဲ့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး မိုးကြိုး အပစ်ခံနေရတဲ့ မြို့တစ်မြို့အကြောင်း
October 9, 2021 October 9, 2021 - by admm
ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ မိုးကြိုးပစ်တာကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးကြလား မသိဘူး။ ကြုံဖူးမယ်ဆိုရင်ကော ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ကြုံဖူးကြမလဲ
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အခုလိုမိုးရာသီမွာ မိုးကြိုးပစ်တာကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ မြင်တွေ့ရဖို့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ မိုးကြိုးပစ်တာကို မမြင်ချင်မှအဆုံးဖြစ်သွားစေမယ့် ထူးဆန်းတဲ့ နေရာလေးတစ်နေရာရှိပါတယ်။
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ အဲ့ဒီနေရာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတရဖွယ်အကြောင်းအရာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ဆောင်းပါးလေးကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်
မိုးကြိုးမြို့တော်၊ ကာတာတမ္ဘို (Catatumbo) ရဲ့အဆုံးမရှိတဲ့မုန်တိုင်း၊ မာရာကိုင်ဘို (Maracaibo) ရဲ့ မီးပြတိုက် အစရွိတဲ့ အမည်မျိုးစုံကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဒေသလေးကတော့ တောင်အမေရိကတိုက် ဗင်နီဇွဲလား (Venezuela) နိုင်ငံရဲ့ ကျူလီယာ (Zulia) ပြည်နယ်မှာရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတစ်နှစ်ကို တစ္မိနစ္ကို မိုးကြိုး (၂၈) ကြိမ် နှုန်းနဲ့ တစ်နှစ်ကို ရက်ပေါင်း (၃၀၀) နီးပါးလောက် မိုးကြိုးတွေအဆက်မပြတ် ပစ်နေတာကြောင့် နာမည်ကျော်ကြားလှပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီနေရာက အမြဲတမ်း အဆက်မပြတ် မိုးကြိုးတွေပစ်ချနေရတာလဲ ? အကြောင်းအရင်းကတော့ ဒီလိုပါ .
မာရာကိုင်ဘို ရေကန်ကြီးဟာ အလ်ား (၁၅၉) ကီလိုမီတာ အနံ (၆၇) ကီလိုမီတာ လောက်ကျယ်ဝန်းပြီး ဗင်နီဇွဲလားပင်လယ်ကွေ့အနီးမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေကန်ကြီးနဲ့ ကာတာတမ္ဘို မြစ်ဝဆုံတွေ့တဲ့ နေရာကတော့ ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ အဓိက နေရာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ တိမ်တိုက်တွေဟာဆိုရင် စတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး တစ်နာရီလောက်အကြာမှာ လျှပ်ပြတ်သလိုအလင်းရောင်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်။ လျှပ်ပြတ်တဲ့အကြိမ်အရေအတွက်က တဖြည်းဖြည်းပိုမိုစိပ်လာပြီး ၁ မိနစ္ကို အကြိမ် (၂၀၀) လောက်အထိ လျှပ်စီးလက်လာပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ တိမ်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးလင်းထိန်လာပြီး ဧရာမ မီးသီးကြီးတစ်လုံးလိုကောင်းကင်မှာလင်းလက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ဒီနေရာမှာ ညသန်းခေါင်အချိန်လာပြီး သတင်းစာတောင် ကောင်းကောင်းဖတ်လို့ရတယ်လို့ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ဖူးတဲ့ ဓာတ်ပုံပညာရှင် ဂျိုးနက်စ်ပွိုင့်တက်ခ် (Jonas Pointek) ကဆိုပါတယ်။
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ လေထုဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုအများဆုံး နိုင်ငံတွေထဲကတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး မာရာကိုင်ဘို ရေကန်ထဲစီးဝင်တဲ့ ကာတာတမ္ဘို မြစ်ဟာ အမြဲတမ်းသိပ်သည်း စိုထိုင်းဆများပြားတဲ့ ရေခိုးရေငွေ့တွေသယ်ဆောင်လာတာကလည်း ဒီလိုမိုးကြိုးမုန်တိုင်းတွေထန်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ရပ် ဖြစ်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မူမမှန်တဲ့ လေကြောင်းပုံစံ နဲ့ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်တွေကလည်း ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို ဖြစ်ပေါ်အောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက်မှာတော့ ကာတာတမ္ဘို လျှပ်စီးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က နိုင်ငံရဲ့ထူးခြားတဲ့မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ကြောင့်ပါ။ အင်ဒီးစ်တောင်တန်းတွေဟာမာရာကိုင်ဘိုရေကန်ကို တောင်ဘက်ကနေမြင်းခွာ ပုံစံဝန်းရံ ထားပြီးမြောက်ဘက် မှာရှိတဲ့ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်နဲ့ဆုံတွေ့စေပါတယ်။
ဒါကြောင့် တောင်ဘက်ကလာတဲ့ အေးမြတဲ့လေပြင်းတွေ ဟာ ညအချိန်မှာ ချိုင့်ဝှမ်းတွေဆီကိုရွေ့လျားပြီး ပင်လယ်နဲ့ရေကန်များတွေက ပူနွေးသောလေနဲ့ ပေါင်းစပ်မိတဲ့အခါ လျှပ်စီးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ လို့ သုံးသပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ပစ္ခ်တဲ့ မိုးကြိုးတွေရဲ့ အရောင်ဟာ သာမန်မြင်နေတွေ့နေကျ အဖြူရောက် လျှပ်စီးတန်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ လိမ္မော်ရောင်၊ အနီရောင်၊ ခရမ်းရောင် စသဖြင့် ရောင်စုံဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းကိုတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်း အတိအက် ဖြေရှင်းချက်မထုတ်နိုင်သေးပါဘူးဆိုတာ တင်ပြရင်းနဲ့ပဲ ဒီစာလေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေနော်
တစ်မိနစ်ကို (၂၈) ကွိမျနှုနျးနဲ့ တဈနှဈပတျလုံး မိုးကွိုး အပဈခံနရေတဲ့ မွို့တဈမွို့အကွောငျး
ပရိသတျတှအေနနေဲ့ မိုးကွိုးပဈတာကို မကျြမွငျကိုယျတှကွေုံ့ဖူးကွလား မသိဘူး။ ကွုံဖူးမယျဆိုရငျကော ဘယျနှဈကွိမျလောကျ ကွုံဖူးကွမလဲ
မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ အခုလိုမိုးရာသီမှာ မိုးကွိုးပဈတာကို မကျြမွငျကိုယျတှေ့ မွငျတှရေ့ဖို့ ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကမျဘာပျေါမှာ မိုးကွိုးပဈတာကို မမွငျခငျြမှအဆုံးဖွဈသှားစမေယျ့ ထူးဆနျးတဲ့ နရောလေးတဈနရောရှိပါတယျ။
ဒီနတေ့ငျဆကျပေးမှာကတော့ အဲ့ဒီနရောလေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ ဗဟုသုတရဖှယျအကွောငျးအရာလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ စိတျဝငျစားရငျတော့ ဆောငျးပါးလေးကို ဆကျလကျဖတျရှုအားပေးကွပါဦးနျော
မိုးကွိုးမွို့တျော၊ ကာတာတမ်ဘို (Catatumbo) ရဲ့အဆုံးမရှိတဲ့မုနျတိုငျး၊ မာရာကိုငျဘို (Maracaibo) ရဲ့ မီးပွတိုကျ အစရှိတဲ့ အမညျမြိုးစုံကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဒသေလေးကတော့ တောငျအမရေိကတိုကျ ဗငျနီဇှဲလား (Venezuela) နိုငျငံရဲ့ ကြူလီယာ (Zulia) ပွညျနယျမှာရှိပါတယျ။
ဒီနရောမှာတဈနှဈကို တစ်မိနစ်ကို မိုးကွိုး (၂၈) ကွိမျ နှုနျးနဲ့ တဈနှဈကို ရကျပေါငျး (၃၀၀) နီးပါးလောကျ မိုးကွိုးတှအေဆကျမပွတျ ပဈနတောကွောငျ့ နာမညျကြျောကွားလှပါတယျ။ ဘာလို့ ဒီနရောက အမွဲတမျး အဆကျမပွတျ မိုးကွိုးတှပေဈခနြရေတာလဲ ? အကွောငျးအရငျးကတော့ ဒီလိုပါ .
မာရာကိုငျဘို ရကေနျကွီးဟာ အလျား (၁၅၉) ကီလိုမီတာ အနံ (၆၇) ကီလိုမီတာ လောကျကယျြဝနျးပွီး ဗငျနီဇှဲလားပငျလယျကှအေ့နီးမှာတညျရှိတာဖွဈပါတယျ။ ဒီရကေနျကွီးနဲ့ ကာတာတမ်ဘို မွဈဝဆုံတှတေဲ့ နရောကတော့ ထူးခွားဖွဈစဉျတှဖွေဈပျေါတဲ့ အဓိက နရောလို့ဆိုနိုငျပါတယျ။
ဒီနရောမှာဖွဈပျေါတဲ့ တိမျတိုကျတှဟောဆိုရငျ စတငျဖွဈပျေါပွီး တဈနာရီလောကျအကွာမှာ လြှပျပွတျသလိုအလငျးရောငျတှေ ဖွဈပျေါလာကွပါတယျ။ လြှပျပွတျတဲ့အကွိမျအရအေတှကျက တဖွညျးဖွညျးပိုမိုစိပျလာပွီး ၁ မိနစ်ကို အကွိမျ (၂၀၀) လောကျအထိ လြှပျစီးလကျလာပါတယျ။ ပွီးရငျတော့ တိမျတိုကျကွီးတဈခုလုံးလငျးထိနျလာပွီး ဧရာမ မီးသီးကွီးတဈလုံးလိုကောငျးကငျမှာလငျးလကျနတောဖွဈပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့ ဒီနရောမှာ ညသနျးခေါငျအခြိနျလာပွီး သတငျးစာတောငျ ကောငျးကောငျးဖတျလို့ရတယျလို့ ဒီအဖွဈအပကျြတှကေို မှတျတမျးတငျဖူးတဲ့ ဓာတျပုံပညာရှငျ ဂြိုးနကျဈပှိုငျ့တကျချ (Jonas Pointek) ကဆိုပါတယျ။
ဗငျနီဇှဲလားနိုငျငံရဲ့ လထေုဟာ ကမျဘာပျေါမှာ မီသိနျးဓာတျငှထေု့တျလှတျမှုအမြားဆုံး နိုငျငံတှထေဲကတဈနိုငျငံ ဖွဈပွီး မာရာကိုငျဘို ရကေနျထဲစီးဝငျတဲ့ ကာတာတမ်ဘို မွဈဟာ အမွဲတမျးသိပျသညျး စိုထိုငျးဆမြားပွားတဲ့ ရခေိုးရငှေတှေ့သေယျဆောငျလာတာကလညျး ဒီလိုမိုးကွိုးမုနျတိုငျးတှထေနျနရေတဲ့ အကွောငျးအရငျးတဈရပျ ဖွဈတယျလို့ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေဆိုပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မူမမှနျတဲ့ လကွေောငျးပုံစံ နဲ့ မွမေကျြနှာသှငျပွငျတှကေလညျး ဒီအဖွဈအပကျြတှကေို ဖွဈပျေါအောငျ တဈဖကျတဈလမျးက ထောကျပံ့ပေးနတေယျလို့သိရပါတယျ။
ဒီနရောမှာ ဆယျစုနှဈတဈခုကြျောကွာ လလေ့ာမှုတှပွေုလုပျခဲ့တဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျတဈဦးရဲ့ ပွောကွားခကျြမှာတော့ ကာတာတမ်ဘို လြှပျစီးရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြက နိုငျငံရဲ့ထူးခွားတဲ့မွမေကျြနှာသှငျပွငျကွောငျ့ပါ။ အငျဒီးဈတောငျတနျးတှဟောမာရာကိုငျဘိုရကေနျကို တောငျဘကျကနမွေငျးခှာ ပုံစံဝနျးရံ ထားပွီးမွောကျဘကျ မှာရှိတဲ့ကာရဈဘီယံပငျလယျနဲ့ဆုံတှစေ့ပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ တောငျဘကျကလာတဲ့ အေးမွတဲ့လပွေငျးတှေ ဟာ ညအခြိနျမှာ ခြိုငျ့ဝှမျးတှဆေီကိုရှလြေ့ားပွီး ပငျလယျနဲ့ရကေနျမြားတှကေ ပူနှေးသောလနေဲ့ ပေါငျးစပျမိတဲ့အခါ လြှပျစီးတှကေိုဖွဈပျေါစတောဖွဈပါတယျ။ လို့ သုံးသပျခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ပစ်ချတဲ့ မိုးကွိုးတှရေဲ့ အရောငျဟာ သာမနျမွငျနတှေနေ့ကြေ အဖွူရောကျ လြှပျစီးတနျးမြိုးမဟုတျဘဲ လိမ်ေမျာရောငျ၊ အနီရောငျ၊ ခရမျးရောငျ စသဖွငျ့ ရောငျစုံဖွဈနတေဲ့ အကွောငျးကိုတော့ သိပ်ပံပညာရှငျတှအေနနေဲ့လညျး အတိအကျ ဖွရှေငျးခကျြမထုတျနိုငျသေးပါဘူးဆိုတာ တငျပွရငျးနဲ့ပဲ ဒီစာလေးကို အဆုံးသတျလိုကျပါရစနေျော
Previous Article မ်က္စိတစ္လုံးသာပါတဲ့ နွားလေးကို မွေးမြူမိပြီးနောက် စီးပွားရေးကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့ လယ်သမားတစ်ဦး
Next Article အမေရိကန်မူလတန်းကျောင်းတွေမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်လိုက်တဲ့ SQUID GAME